Ibhola le-silicone ibhodlela lokuphuza amanzi elinamanzi China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Amabhodlela Amanzi weSilicone > Izidakamizwa Zama-Silicone Amanzi Aphephile > Ibhola le-silicone ibhodlela lokuphuza amanzi elinamanzi
I- port ye-silicone ye-port engekho emgodini wokuphuza amanzi
Ibhodlela lethu le- silicone eliphuza amanzi okuphuza amanzi elincane lilula kakhulu ukuphuza kwamanzi nokugcwalisa amanzi, njengoba kunomklamo ombili, umlomo owodwa wokugcwalisa amanzi kanye nomunye umlomo nge-valve eziphambene ezingagcina ubufakazi bethu bokuphuza ibhodlela buyeke phansi, bonke babo bane-layer engu-5 evuleka ubufakazi bokuthi kungenzeka ukuthi isiqiniseko sokuthi ibhodlela lethu lingalokothi ligijimise i-dorp elilodwa esikhwameni sakho, futhi likhanya kakhulu, cishe i-1/5 kuphela isisindo samabhodlela amanzi ase-samilar kwezinye izinto. futhi ube nezinzuzo ezinikezwe ngezansi:
Ulapha: >> Amabhodlela amanzi e- Sport Folda amabhola >> Imidlalo ye-silicone yebhola ebhodini lokuphuza amanzi
I-sport silicone ibhodlela lokuphuza amanzi elingaphansi kwamanzi yiyona imikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. Zethu Ezemidlalo abicah egoqekayo amanzi okuphuza ibhodlela Ngokuyinhloko activicity ourdoor. Okubalulekile kwebhodi lethu le- Sport silicone lokuphuza amanzi elingu-100% le-BPA elingenabhilikhi ebangeni lobuchwepheshe kanye ne-PP. I Ezemidlalo abicah amanzi egoqekayo ukuphuza ibhodlela yethu ngokuphelele non-enobuthi, futhi ovunyelwe iSigungu FDA / SGS / LFGB / CE. Kuyinto enothile, engazinzile. Ngakho ngiyaqiniseka ukuthi i- bpa yethu ikhululekile ibhodlela lamanzi lingcono kakhulu kuwe .Siye senza umkhiqizo we-silicone iminyaka engaphezu kwengu-10, kanye nebhizinisi lamazwe angaphezu kweminyaka engama-4. Sinesipiliyoni seminyaka eyisishiyagalolunye ekukhiqizeni Amabhodlela wamanzi angabheki , Amabhodlela wokuhamba we-silicone , ama- Silicone ahlukahlukene , Izingane ezithinta umgexo , Amakhemikhali ahlaziya amathoyizi , Izingane ezihamba nge-pacifier clips , I- Baby teething mitten , njll. Okokugcina, Siyizimboni, ngakho-ke singakunikeza izimpahla ngentengo yokuncintisana ngekhwalithi ephakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe.